Ikhtiyaariyada Luuqadda Dhexgalka - Dugsiyada Aagga Robbinsdale
Dugsiyada Robbinsdale Area waxay hormuud u ahaayeen inay ardayda siiyaan fursado barasho oo labada luuqad ah in kabadan 30 sano. Degmadeennu waxay ahayd degmadii labaad ee Minnesota oo siisa fursadda ardayda inay dhex galaan luuqad labaad. Tan iyo markii aan soo dhaweynay fasalkeena xanaanada caruurta ee ugu horeyay sanadkii 1986, Dugsiyada Robbinsdale Area waxay wali hogaamiye ka yihiin barashada luuqada, waxayna siinayaan barnaamij dhameystiran oo lagu taageerayo ardayda tacliinta iyo horumarka luqadooda laga bilaabo Xanaanada ilaa fasalka 12aad. Barnaamijyadeena, ardaydu waxay bartaan isla manhajkan iskuulada Robbinsdale Aag halka ay ka helayaan heerar sare oo aqoon ah labada Isbaanish iyo Ingiriis.
Isuduwaha Barnaamijyada Luuqadda Labada Luuqad
Noqo laba-luqadle iyo aqoon-yaqaan, kobciya heerar sare oo aqoon ah laba luqadood.
Ku samee heer fasal ama ka sareeya qaybaha tacliinta labada luuqadood.
Muuji dabeecadaha wanaagsan iyo dhaqanka wanaagsan.
Barnaamijka Robinsdale Area Schools ee Hal-Way Isbuucaan Isbaanishka ayaa ah mid ka mid ah barnaamijyada ugu da'da weyn ee lagu quusayo gobolka Minnesota.
U furan ardayda oo dhan iyada oo loo marayo codsi iyo bakhtiyaa-nasiibka Robbinsdale Spanish Immersion Elementary
Barnaamijka dugsiga oo dhan
Focus on helitaanka Isbaanishka oo ah luqad labaad
Ardayda degan degmada waxay helaan gaadiid
Ardayda dugsiga hoose ee Isbaanishka waxay kaqeyb galaan Robbinsdale Spanish Immersion (RSI) oo leh hal waddo 90/10 barnaamijka wax lagu barto kaasoo ardayda laguqasuuqo inta badan maalintooda Isbaanishka. Ardayda waxay si tartiib tartiib ah u helaan casharro dheeri ah oo Ingiriis ah laga bilaabo Fasalka 2aad.
Kadib RSI, ardaydu waxay dhigtaan Dugsiga Dhexe ee Plymouth si ay usii wataan waxbarashadooda Isbaanishka. Ardaydu waxay qaataan seddex fasal maalintii Isbaanishka heer kasta oo fasal ah: Sayniska, Cilmiga Bulshada iyo Farshaxanka Luuqada Isbaanishka.
Dugsiga sare, ardaydu waxay qaataan hal koorso maalintii Isbaanishka heer kasta oo fasal ah. Dugsiga Sare ee Armstrong wuxuu bixiyaa koorsooyin Meelaynta Horukacsan oo Isbaanish ah; Dugsiga Sare ee Cooper wuxuu bixiyaa koorsooyin caalami ah ee Baccalaureate Immersion. Markay qalin jabiyaan, ardaydu waxay u qalmi karaan mid ka mid ah Shabakadaha Laba-luqadlaha ah ee Minnesota oo laga heli karo Waaxda Waxbarashada ee Minnesota (MDE).
Macluumaad Dheeraad ah: Shaabadaha MDiling Labada Af
Barnaamijka Isbaanishka Labada Luuqad
Qoysasku waxay dhammaystiraan foomka doorbididda barnaamijka waana la aqbali doonaa marka horeba, marka hore adeeg loo bixiyo
Fasallo isku dheelitiran oo u dhexeeya dadka ku hadla afka Ingiriiska iyo kuwa ku hadla Isbaanishka
ardaydu midba midka kale wuu kaalmeeyaa labadaba tusaale iyo barteyaal luqadeed
Laba fasal oo Isbaanish ah oo laba luuqadood ah oo heer fasal ah (Xanaanada sanad dugsiyeedka 2019-2020; Xanaanada caruurta iyo fasalka 1aad 2020-2021 sanad dugsiyeedka; fasallo dheeri ah ayaa lagu dari doonaa sanad dugsiyeed kasta oo leh fasalka K-5aad oo buuxa sanadka sanad dugsiyeedka 2024-2025)
Gaadiid ayaa la siiyaa ardayda ku nool aagga ka qeybgalka Northport
Ardayda ku soo biira barnaamijka waxay arki doonaan faa'iidooyin aan caadi aheyn inta ay nool yihiin. Ogaanshaha laba luuqadood waxay u oggolaaneysaa guul weyn fasallada luuqadda jaamacadda iyo fursadaha shaqo. Intaa waxaa dheer, xirfadaha luqaddu waxay albaab u fureysaa dalal kale, dhaqamo iyo dad kale.
Ka waran haddii ardaygaygu uusan ku hadlin Ingiriis ama Isbaanish?
Sidee loola socdaa waxtarka barnaamijka?
Sideed u maamuustaa oo u horumarisaa luqadaha kale ee ay ku hadlaan ardayda?
Sideen uga caawin karaa ardaygayga shaqada gurigooda haddii aanan ku hadlin luqadda ama fahmin howsha?
Ardaygayga ku hadla af Ingiriiska wuxuu dhigtaa fasalka 2aad welina kuma hadlayo Isbaanish kasta. Barnaamijku ma shaqeynayaa?
Ardaygeyga Fasalka 5aad wuxuu ku jiray barnaamijka oo wuxuu haddaba ku hadlayaa laba luqadood Isbaanish iyo Ingiriis. Ma inay sii joogaan barnaamijka?
Sidee ardayda barnaamijyada labada luuqad leh isbarbar dhigaan tacliin ahaan ardayda ku jirta noocyada kale ee barnaamijyada waxbarashada?
Barnaamijka waxaa loogu talagalay in lagu taageero ardayda iyada oo aan loo eegin afkooda hooyo, hadey tahay Ingiriis, Isbaanish, ama luqad kale. Waxbarista waxaa lagu bixiyaa Ingiriisiga iyo Isbaanishka waxayna taageertaa ardayda markay horumarinayaan labadaba.
Waxaan dib u eegis ku sameynaa xogta qiimeynta ee Ingiriiska iyo Isbaanishka waxaana soo aruurineynaa jawaab celin si loo horumariyo loona hagaajiyo barnaamijka. Waxaan ku qabannaa dib-u-eegista barnaamijka xilliyada caadiga ah iyadoo la adeegsanayo Xarunta Mabaadi'da Luuqadaha ee Mabaadi'da ah ee Labada Luuqad .
Degmadeena, waxaan ku leenahay in ka badan 80 luqadood oo guriga looga hadlo. Waxaan qiimeynaa luqadaha badan ee qoysaskeena waxaanan u aqoonsaneynaa ardayga luqadiisa hooyo inay u tahay faa iido waxbarasho.
Waxaan ku dhiirrigelinaynaa qoysaska inay marka hore carruurtooda ku hadlaan oo wax ku akhriyaan afkooda hooyo. Markay ardaydu bartaan inay ku hadlaan kuna akhriyaan afkooda qoyskooda, waxay si fudud ugu bartaan Ingiriisiga.
Macalimiinta Robbinsdale waxay sharfayaan luqadaha, dhaqanka iyo aqoonsiga ardayda. Si tan loo sameeyo, macallimiintu waxay weydiisan karaan ardayda inay adeegsadaan afafkooda si ay u dhammaystiraan shaqooyinka, waxay u siiyaan buugaag ku qoran luqado kala duwan iyo waxyaabo kaloo badan.
Ujeedada shaqada guriga waa in ardayda la siiyo tababar dheeri ah fikrad ama xirfad ay horay ugu soo barteen fasalka. Ardaydu waa inay awoodaan inay ku dhaqmaan howshan si madaxbanaan, iyadoon loo eegin luqadda. Waxaad weydiisan kartaa ardaygaaga inuu kuu sharraxo casharrada guriga oo uu ku sharaxo waxa ay ku sameynayaan luqadda guriga ee qoyskaaga.
Ardaydu waxay ku horumariyaan luqadaha heerar kala duwan. Badanaa awooddooda dhagaysi waxay kobciyaan ka hor intaanay awood u lahayn inay hadlaan. Ardaygaagu waxaa laga yaabaa inuu wax ku akhrinayo waxna ku qorayo Isbaanish laakiin kuma faraxsana inuu kula hadlo fasalka dibadiisa. La hadalka macallinka ardaygaaga ayaa kaa caawin doona inaad fahamto haddii horumarkooda af Isbaanishku uu ku socdo iyo in kale, iyo waxaad sameyn karto si aad ugu dhiirrigeliso inay ku hadlaan Isbaanish badan.
Haa! Iyadoo laga yaabo in aqoonyahanada da'da yar ay si fiican ugu hadlayaan laba luuqadood, hadana ma aysan soo saarin xirfadaha akhriska iyo qoraalka ee ay u baahan yihiin si ay ugu guuleystaan tacliin ahaan labada luuqadood. Ujeeddada barnaamijyadeenna labada-barasho ee Labada-Luqadood waa inaan taageerno horumarinta Isbaanishka iyo Ingiriiska illaa iyo Fasalka 12aad sidaa darteed waxay aad ugu xeel-dheeri doonaan labada luuqadood waxayna u adeegsan karaan kulliyadda, shaqooyinka iyo wixii ka dambeeya.
Daraasaduhu waxay muujinayaan, guud ahaan, bartayaasha af Ingiriisiga iyo kuwa ku hadla Ingiriisiga inay horumar la taaban karo ka sameeyeen labada afba. Labada kooxba waxay ku kala sarreeyeen ama si fiican uga sarreeyeen heerka fasal labada dugsiba; iyo labada kooxba waxay kuqiyaaseen heerar isbarbar dhig ah ama heer sare ah marka la barbardhigo asxaabta isku luuqadda ah ee goobaha kale ee waxbarashada. Imtixaanada caadiga ah ee la tixraaco ee aqrinta iyo ku guuleysiga xisaabta ee Ingiriisiga, dadka ku hadla Afka hooyo ee Ingiriisiga ayaa ka fiicnaaday dhiggooda Ingiriisiga keliya ee fasallada lagu barto Ingiriisiga oo keliya. Bartayaasha Luqadda Ingiriisiga ee ku bartay Ingiriisiga labada barnaamij ee labada luqadood ee immersion waxay si aad ah uga sarreeyaan dhiggooda barashada luqadda Ingiriisiga oo iyagu soo bartay barnaamijyo kale oo noocyo kala duwan ah waxayna sidoo kale la mid noqdeen ardayda dhigata Ingiriisiga hooyo ee fasallada ku baxa Ingiriiska oo keliya.